Guddoomiyaha Guddidda Doorashada Oo Soo Bandhigay BallanDarradda Xukuummadda Madaxweyne Siilaanyo, Baaqna U Daneeyayaasha Doorashada Somaliland | Dhamays Media Group
Guddoomiyaha Guddidda Doorashada Oo Soo Bandhigay BallanDarradda Xukuummadda Madaxweyne Siilaanyo, Baaqna U Daneeyayaasha Doorashada Somaliland
Hargeysa (Dhamays)- Cabdi-qaadir Iimaan Warsame, Guddoomiyaha guddida doorashooyinka Somaliland ayaa madaxweyne Siilaanyo ku eedeeyey inaanu wali bixin kharashkii loogu tala galay bixinta kaadhadhka codbixiyayaasha Somaliland.
Gudoomiye Cabdiqaadir Iimaan oo ka hadlayey munaasibad guddida doorashadu ku soo bandhigaysay natiijada hor dhaca ah ee diwaan gelinta codbixiyayaasha, ayaa sheegay in balan qaadkii madaxweyaha ee bixinta kharashka lagu fulinayo qaybtina kaadhadhka codbixintu aanu wali fulin, waxaanu madaxtooyada u soo jeediyey inay fuliyaan balantii ay hore u galeen.
Guddoomiye Cabdiqaadir Iimaan oo arimahaas ka hadlaya ayaa waxa uu hadalkiisa ku bilaabay “Lacagta lagu fulinayo bixinta kaadhadhka oo ay Deeq-bixiyeyaashu diideen inay bixiyaan, iyadoo markii hore ay isa saarnaayeen diwaan-gelinta iyo bixinta kaadhku, balse uu madaxweynuhu balanqaaday bishii September 2016-kii, lacagtaas oo noqonaysa afar Milyan oo dhadhow, balanqaad baanu haynaa iyadana, laakiinse wali Sanduuqayaga waxba kuma jiraan” ayuu yidhi Mr Iimaan.
Sidoo kale gudoomiye Cabdiqaadir Iimaan ayaa sidoo kale soo bandhigay lacag lagu leeyahay dawlada waxaanu yidhi “Shaqada aanu hada gacanta ku hayno, dawlada Somaliland waxay bixinaysay afar milyan oo doolar, waxaanan ka haynaa sadex milyan, halkaasna baaqi ayaa lagaga leeyahay xukuumada.”
Guddoomiyaha guddida Doorashooyinka Somaliland waxa uu gabagabadii ugu baaqay dhamaan dhinacyada ay khusayso qabsoomida Doorashadu inay dhamaystiraan howlaha kaga aaddan ee laga sugayo. “Guddida Doorashaddu wuxuu ka codsanayaa dhamaan dhinacyada ay khusayso inay si deg deg ah u soo dhamaystiran waxa kaga aaddan Doorashada, hadday tahay Xisbiyada,hadday tahay Dowladda iyo haday tahay cid kale oo la xidhiidha oo ay wax kaga xidhanyihiin Doorashada” ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey Guddoomiye Iimaan.
Haddaba hadalkan ka soo yeedhay Guddoomiyaha Guddida Doorashada Somaliland, waxa uu waji gabax ku yahay Madaxweyne Siilaanyo oo laba maalmood ka hor goob fagaare ah ka sheegay inay xukuumaddiisu bixisay, bixinna doonto kharashaadka ku baxaya howlaha doorashooyinka boqolkiiba Sagaashan(90%), isagoo madaxweyne siilaanyo arrintaas ku tilmaamay mid muujinaysa sida ay xukuumaddiisu daacada uga tahay inay doorashooyinku u dhacaan sidii loogu talo-galay.
“Saamiga isbarbar dhigga kharashka diiwaangelinta cod-bixiyeyaasha iyo doorashooyinka Madaxtooyada ee inagu soo socota, waa mid si weyn uga duwan qorshayaashii hore ama saami qaybsiyadii hore. Xukuumadaydu waxay dabooshay ama dabooli doontaa in ku dhow %90 kharashyada diiwaangelinta cod-bixiyeyaasha iyo doorashada Madaxtooyada ee qabsoomi doonta November 2017. Taasi waxay daliil cad u tahay, sida aanu daacad ugu nahay, isla markaan ugu diyaar garownay, gudashada xil wadareedkaa dusha naga saaran.” Ayuu Madaxweyne Siilaanyo ku yidhi Khudbad dheer oo uu ka jeediyey munaasibad lagu furay Mashruuca sahaminta Shidaalka Somaliland. Siilaanyo waxa uu khudbadiisaas ugu goodiyey Qaadhaan-bixiyeyaasha ka taageera dalkiisa arrimaha Doorashooyinka oo uu u sheegay “ ma jirto cid nagu sandulaysay nidaamka Doorashooyinka iyo dimuquraadiyada ee waa wax aanu maslaxadayada ka aragnay”.
Haddaba marka la isbarbar dhigo gaabiska Xukuumaddiisa ee bixinta Kharashaadka kaga hagaagay Diwaan-gelinta iyo hadalka madaxweynaha, waxa muuqata in Madaxweyne Siilaanyo dhinac ka dhaafsanyahay inuu waajaho fulinta howlaha uga yaalla Doorashada. haddii kale waxa xaalkiisu noqonayaa qowda maqashii oo waxna ha qaban, taasoo ka dhigan inuu “Madaxweyne Siilaanyo oo Af dhiiran iyo Gacan gudhan ku curyaaminayo howlaha Doorashooyinka jahawareerku ka taaganyahay”
Waxaana xusid mudan in loo baahanyahay ku talo-gal miisaan leh oo lagaga faraxasho diyaarinta Doorashooyinka isdaba socda ee wakhtiga koobanyahay. sidaasoo ay yahay ayaa Kharashka Xukuumadda laga doonayaa uu yahay mid loogu talo-galay in lagu fuliyo howl-galka bixinta Kaadhadhka Codbixiyeyaasha oo ka bilaabmaysa dalka, sida ay sheegeen Guddida Doorashooyinku.
Previous: Xisbiga Waddani Oo Ka Horyimi Qorshe Uu Madaxweyne Siilaanyo Awooda Kaga Qaadayo Gudidda Doorashooyinka Qaranka + Video
Next: Xukuummadda Somaliland Oo Digniin Culus U Dirtay Madax-dhaqameedka Iyo Qaar Ka Mid Ah Siyaasiyiinta Dalka + Video